TV-ga MBC oo halis ugu jira in la qarxiyo iyo gabadh ka qeyb ka aheydka musalsalka oo la jabsaday ciwa…. | Xaqiiqonews
TV-ga MBC oo halis ugu jira in la qarxiyo iyo gabadh ka qeyb ka aheydka musalsalka oo la jabsaday ciwa….
Waxaa halis aad u daran dareemaya shaqaalaha iyo maamulka channelka MBC oo bisha ramadaan bilaabay musalsal caan baxay oo qaatay magaca “غرابيب سود’ waxaana musalsalkani uu ka hadlayaa kooxda dowladda islaamiga.
gabadh la magacaabo fadumo nasir oo tuniisiyan ah islmarkaana qeyb ka aheyd musalsalka lagu dacaayadeynaayo kooxda dowladda islaamka ayaa sheegtay in la jabsaday ciwaankeeda facebook iyadoo sidoo kale la kulantay hanjabaadyo dhowr ah oo ku aadan doorkeeda ay ka qaadatay musalsalka.
Faduma Nasir ayaa sheegtay in fariimaha soo gaaraya ee hanjabaadda ah ay ku beereen cabsi xoogan balse aysan ka shalaayeen go,aankeeda ah in ay qeyb ka noqoto musalsalka.
dhanka maamulka guud ee Shaashada MBC cali jaabir ayaa sheegay in ay soo gaareen fariimo dhowr ah oo hanjabaad ah oo ku aadan in la qarxin doono xarunta Tv-ga sababo la xariira musalsalka “غرابيب سود’ oo kooxda dowladda islaamiga ay u argeen duulaan iyagga ka dhan ah.